eNasha.com - विपना थापा
बोलिरहनु पर्ने निर्दोष बाला
ओमविक्रम थापालाई सिनेमाको ठूलो शोख थियो । मनोरञ्जनका लागि आज जस्तो अन्य चीजहरुको विकल्प नहुँदा हिन्दी सिनेमाहरु हेनु त्यतिबेलाका लागि रमाइलो बाध्यता थियो । यसरी हिन्दी फिल्म हेदाहेर्दै उनको मनमा सुटुक्क एउटा सपना पन्पिदैं थियो । त्यो सपना के थियो भने आफ्नी छोरीलाई पनि हिराइन बनाउने । यो सपना त्यतिबेलाको थियो जब बलिउडमा नेपाली चेली मनिषा कोइरालाको अभिनयले तहल्का पिटको थियो । चार छोरीका पिता ओमविक्रम जब-जब आफ्नी साहिंली छोरीलाई हेर्थे तब-तब उनको मनबाट निस्कन्थ्यो- 'यसलाई मनिषा कोइरालालाई जस्तै हिरोइन बनाउनु पर्छ ।' ओमविक्रमको यो वाक्यांश बिस्तारै पूरा परिवारको मुद्दा बन्यो । गोरो काया, खैरा आँखा र आकर्षक जीउडालकी धनी र बुबाको कार्बन-कपि मानिएकी साहिंली भने परिवारको सपनाबाट बेखबर आफ्नै बाल दुनियाँमा मस्त थिइन् । सानैदेखि पट्रपट्र बोल्न र नाच्नमा बित्पात उनी घरमा मनोरञ्जनको प्रमुख खुराक थिइन् । ओमविक्रम छोरीलाई हिराइन बनाउने सपना साँचेर दिनदिनै छोरी बढेको हेरिरहेका थिए । तर समय अर्कै धुनमा थियो । जब साहिंली छोरी मात्र नौ वर्षी थिइन् ओमविक्रम आफ्नो सपना र पूरा परिवारलाई बिचल्लीमा पारेर परमधाम भए । त्यतिबेला यी बालिका ज्ञानोदयमा मात्र तीन कक्षाकी छात्रा थिइन् । परिवारको अभिभावकको मृत्युले त्यो परिवार मानसिक रुपमा छिन्नभिन्न भयो । त्यसपछि त के को रमाइलो के को सपना - पूरा परिवार संकटका दिन गुजार्न थाल्यो । आर्थिक अभाव त खास थिएन तर मूली नहुँदा बचेराहरु टुहुरा महसुस गर्थे । मानिसहरु भन्छन् सच्चा दिलले कुनै कुरा कल्प्यो भने कालान्तरमा त्यो पूरा हुन्छ । ओमविक्रमको सपनामा शायद त्यो शक्ति थियो ! उनले संसार छाडेको पाँच वर्षनबित्दै उनकी छोरी नेपाली फिल्म इण्डष्ट्रिमा हिराइनको रुपमा प्रवेश गरिन् । प्रवेश गर्न मात्र सार्‍हो थियो फेरि त उनको दौड शुरु भइहाल्यो । चलचित्र 'जन्मभूमि'मार्फ् मात्र चौध-पन्ध्र वर्षो कलिलो उमेरमा कला यात्रामा होमिएकी यी बालिका आजभोलि विपना थापाका रुपमा जनप्रिय छिन् ।
भैरहवामा माता पिताको तेश्रो सन्तानको रुपमा जन्म लिएकी विपना थापालाई ठूली भएर यो बन्छु-त्यो बन्छु भन्ने केही पनि थिएन । घरमा दिदीबहिनी भन्दा भिन्न रुपरंग भएकाले घरका सबैजना भने ख्याल ख्यालमा यसलाई हिरोइन बनाउनु पर्छ भन्ने गर्दथे । तर उनलाई सानोमा नाच्ने कुराबाहेक अरु केही थाहा थिएन र थाहा हुने कुरा पनि भएन । नाच्नेबाहेक बास्केटबल खेल्नमा उनलाई रुचि थियो तर उति राम्रो खेलाडी भने थिइनन् । त्यसैगरि पढ्नमा पनि उनी ठिकठिकैकी विद्यार्थी थिइन्- दिदी जस्तै । तर भाइ र बहिनी भने अरुको तुलनामा पढ्नमा तेज थिए । ज्ञानोदयबाट एसएलसी दिइसकेपछिको खाली समयको सदुपयोगका लागि विमला श्रेष्ठकोमा नाच सिक्ने गर्थिन् उनी । त्यही बेला अचानक उनलाई एउटा विज्ञापनमा मोडलिङ गर्ने अफर आयो । परिवार उनलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गराउन मानसिक रुपमा तयार नै थियो, त्यही भएर कसैले आपत्ती गर्ने कुरै थिएन । फेरि यो प्रस्ताव ल्याउने व्यक्ति सिआरसिका प्रमुख उनको बाबाका साथी थिए । उनले प्रस्तावलाई सहर्षस्वीकारिन् र विधिवत् रुपमा सिनेमाको रंगीन संसारमा प्रवेश गरिन् । उनले गरेको यो एड प्यान्थरको थियो जसलाई भूषण दाहालले निर्देशन गरेका थिए । यतिबेला उनको उमेर मात्र १४ वर्षो थियो । शारीरिक विकास पूर्ण रुपमा नभइसकेकाले उनलाई परिपक्व युवती देखाउन निकै कसरत गर्नु परेको थियो । यो झण्डै २०५१/५२ सालतिरको कुरा थियो ।
त्यही सालको कुनै दिन उनी सपिङका लागि सुन्धाराबाट खिचापोखरीमा जाँदै थिइन । बाटोमा अचानक उनलाई रोक्दै एक व्यक्तिले सोधे- आर यू विपना?
उनको उत्तर थियो- यस । 'हामी एउटा सिनेमा बनाउँदैछौं । आर यू इन्टरेस्टेड ?
उनले सुझबुझ पूण्ा उत्तर दिइन्- मलाई भनेर त हुँदैन । घरमा आएर कुरा गर्नु न !
यसरी उनलाई बाटैमा समातेर हिराइन बनाउन उत्सुक व्यक्ति थिए- मोहन निरौला । मोहन निरौलाले उनलाई त्यही प्यान्थरको एड गर्दाको समय देखेका रहेछन् । तर विपनालाई भने यसको ख्यालै थिएन । भोलिपल्ट मोहन निरौलासहित प्रशान्त गिरी, राजकुमार पोखरेल, छवि ओझा आदि मानिस आएर परिवारसँग कुरा गर्नु भयो । केही वादविवाद र छलफलपछि परिवार राजी भयो । विपनाले पाँचहजार रुपिँया साइनिङ्ग अमाउन्ट लिएर 'जन्मभूमि'को नायिका हुने अनुबन्धनमा हस्ताक्षर गरिन् । त्यतिबेला उनले आफ्नो बाबा ओमविक्रम थापालाई झलझली सम्झिइन् । र मनमनै भनिन्- 'बाबा म तपाईंले साँच्नु भएको सपना पूरा गर्न जाँदैछु । मलाई आशीर्वाद दिनुस् ।'
निश्चयनै उनलाई आशीर्वाद लाग्यो । त्यो आफ्नो बाबाको थियो कि नेपाली जनताको, अरुनै जानून् । तर जे सुकै भए पनि जन्मभूमि गर्दा भविष्यमा यसैमा लागिरहन्छु भन्ने कत्ति पनि सोच नबनाएकी विपना आज एक दशकदेखि यो क्षेत्रमा निरन्तर छिन् ।
त्यो पनि नचलेपछि नेपाली सिनेमामा केही छैन ? नेपाली फिल्म उद्योगकी अभिन्न अंग विपना यस्ता आलोचनाको पक्षमा छिन् ? उनी उद्योगले लिएको दिशाबाट सन्तुष्ट छिन् ?
"सतुष्ट छु । सन्तुष्ट नहुने कारणै छैन । हामी बीस लाखमा बीस कराडको सिनेमासँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छौं । योभन्दा बढी के चाहियो ?"
उनले खेलेका सिनेमाको संख्या १०८ पुगिसकेको छ । २०५१ सालदेखि अहिलेसम्मको समयावधि गन्ने हो भने ठ्याक्कै बार्‍ह वर्षभएछ उनले फिल्म खेल्न थालेको । तर पहिलो दिनको सुटिङ्गमा जस्तो अप्ठ्यारो उनलाई कहिलै लागेन ।
'जन्मभूमि'को पहिलो दृश्यनै विपनाबाट शुरु हुन्थ्यो । जसमा उनले गर्भवती महिलाको रुपमा घर भित्रबाट बाहिर निस्केर भाँडा माझ्नु पर्ने दृश्य थियो । एक त पहिलो सुटिङ्ग त्यसमाथि कलिली युवतीले गर्भवती बन्नु पर्नेजस्तो अनुभवहीन काम ! तर यो भन्दा आपत् के थियो भने यो सुटिङ्ग उनको घरनजिकै कलंकीमा हुँदैथियो, जहाँ उनलाई बच्चादेखि बुढासम्मले चिन्दथे । जबजब उनलाई गर्भवती बनाइदैगइयो, त्यतित्यति उनी आत्तिन थालिन् । अन्त्यमा जब दृश्य दिन जानुपर्ने भयो, उनी भाँडा माझ्न जानु त कता हो कता ह्वाँ ह्वाँ रुन थालिन् । सारा यूनिट उनको रुवाइसँगै आर्श्चर्यचकित भयो । अन्त्यमा जब कारण थाहा भयो सारा युनिटले उनलाई फकाउन थाल्यो । अन्त्यमा केही नलागेर बसुन्धरा भूसालले पेट ठूलो बनाएर उनले गर्नुपर्ने अभिनय देखाएपछि हिच्किचाउँदै उनले भाँडा माझ्ने काम फत्ते गरिन् । आज त्यो क्षण सम्झिदा उनलाई आफ्नो केटाकेटीपन देखेर अचम्म लाग्छ । तर यो लामो समयावधिमा यस्तो दिन फेरि कहिल्यै दोहोरिएन ।
फिल्मले जन्मायो विपनालाई । यसले हुर्कायो-बढायो-योग्य पनि बनायो । जीविकाको श्रोत पनि यही नै हो । तर फिल्म उद्योगको पोर्टफोलियो, यसको प्रगति, निरन्तरता, यसले समातेको शैली, सबैमा मानिसहरुले प्रश्न चिन्ह लगाएका छन् । मानिसहरु भन्छन्, उद्योगले नयाँ दिशा समात्नु त कता हो कता प्रकाश थापा, बिएस थापाजस्ता हस्तीले तयार गरेको गोरेटोबाट सिनेमा भड्किएर हिन्दी फिल्मको कार्बन कपिको रुपमा सीमित भएको छ । आलोचकहरु भन्छन्- नेपाली सिनेमाले घुँडा टेकिसकेको छ । निखिल उप्रेतिको एक्सन सिनेमा अन्तिम हतियार हो ?
पूरा सिनेमा उद्योगले विपनाको जस्तै विचार राख्छ । जबकी आलोचकहरु नेपाली सिनेमाको स्तर दिनानुदिन खस्कक्दै गएको धारणा राख्छन् । न कथामा, न प्रविधिमा न प्रस्तुतिमा नेपाली सिनेमाले आफ्नो लय समातेको छ । तर पनि सिनेमा बन्ने क्रम जारी नै छ । बलिउडका फिल्मलाई जस्ताको तस्तै उतार्ने सूत्रलाई नेपाली सिनेमाले अंगीकार गरेको छ । यस्तो इष्डष्ट्रिको हिराइन हुनुले कुनै अर्थ राख्छ - यस्ता धेरै प्रश्नहरुको विपनासँग एउटै उत्तर छ - बि पोजिटिभ ।
एकसौ भन्दा बढी फिल्म खेलिसकेकी विपना आफूले पाएको भूमिकाबाट पनि खासा सन्तुष्ट छिन् । पुरुष प्रभावित पूरा समाज मात्र नभइ इण्डष्ट्रीमा एक जना पनि सक्रिय महिला निर्देशक नहुँदा पनि उनी आफूले पाएका भूमिकाहरु नारी प्रधान ठान्छिन् । प्रत्रि्रश्न गर्दै उनी भन्छिन्- हिरोइन बिनाको कुनै नेपाली फिल्म हेर्नु भएको छ ?
तैपनि उनलाई आफूले खेलेका तमाम फिल्म मध्ये पापी, तँ त सार्‍है बिग्रिस नी बद्री, आगो, इन्द्रेणी, मुस्कान फिल्ममा गरेको अभिनय मनपर्छ । किनकी उनको विचारमा यी फिल्ममा पाँचसय फिल्मको कथा छ ।
सन्तोषं परमं सुखम् भन्ने सिद्धान्तकी अनुयायी हुन् विपना । आफ्नो करियरग्राफबाट पनि खासा सन्तुष्ट छिन् विपना । यो अवधिमा सयकडौं प्रकारका चरित्रहरु निर्वाह गरिसकेकी छिन् । कहिले श्रीमतीको रुपमा, कहिले प्रेमिकाको रुपमा त कहिले आमाको रुपमा । तर कुनै चरित्र बाँकी छन् जो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिजिविषा छ विपनामा - "तारादेवीको जीवनमा कसैले फिल्म बनाए त्यो भूमिका गर्ने इच्छा छ । आफ्नो चिरपरिचित हँसमुख शैलीलाई गम्भीरतामा ढाल्दै विपनाले भनिन् ।
उनका समकक्षी धेरै हिराइनहरु अब यो उद्योगमा छैनन् । धेरै विदेश पलायन भइसके भने धेरै बिहावारी गरेर बच्चा हुर्काउने अभियानमा छन् । विपना भने दुइटै बाटोको विकल्पमा ड्रेस डिजाइनिङ्गको क्षेत्रमा हाम्फालेकी छिन् । निर्माताहरुले पुरानाको साटो नयाँ हिराइनलाई फिल्ममा मौका दिनुको अलावा नेपाली फिल्म कम बन्न थालेको पर्रि्रेक्ष्यमा उनको यो क्षेत्रको रोजाइ स्वभाविक हो । तर सुदूर भविष्यमा यसले मात्र भरथेग गर्ला - आफ्नो चिरपरिचित् शैलीमा विपना भन्छिन् - हू केयरस् अबाउट फ्यूचर? म ज्यादा सोच्ने केटी होइन । जे पर्छ त्यही र्टछ ।
आफूभन्दा सिनियर त सिनियर जुनियरहरुले पनि घरबार गर्न थाले सकेका छन् । सेल्रि्रेटि अनि त्यसमाथि अविवाहित अझ भएन युवती पनि । यस्तो विवाहको चासो कसलाई नहोला - स्वभावतः विपनाको विवाहको जिज्ञासा अन्यथा नहोला ।
विवाहको जिज्ञासामा मजाले हाँस्दै उनले भनिन्- जन्म, मृत्यु र विवाह माथि नै तय हुन्छ भन्छन् । तय त भएको होला नि !
त्यसो त घरमा केटाहरुको प्रस्ताव लगातार आइरहेको र परिवारले केटा हेर्ने अभियान तीव्र बनाएको सूचना पनि उनले दिन भुलिनन् ।
भ्याएसम्म विपना हलिउड बलिउडका सिनेमा हेर्न छुटाउँदिनन् । हलिउडमा एक्सनप्रधान रकी, रेम्बो जस्ता उनका सिनेमा मनपर्छ भने बलिउडमा जोन अब्राहम । त्यसो भए के उनको स्वप्न पुरुष पनि यस्तै होस् भन्ने लाग्छ उनलाई - "छ्या त्यस्तो होइन । समझदारी पहिलो शर्त हो । त्योबाहेक आफैं कमाउने, साथै ह्याण्डसम त हुनु परिहाल्यो नि !"
चञ्चल, बोलक्कड र विनोदी स्वभावकी छिन् विपना । उनलाई बोलिरहनुपर्छ । फुसद भयो कि आफ्ना परिवारका साथमा रेष्टुरेण्टमा गएर समय बिताउनु उनलाई रमाइलो लाग्छ । तर कामको व्यस्तताले यस्तो अवसर कमै मात्र जुट्छ । एक समय थियो उनी सिनेमाकी सबैभन्दा व्यस्त अभिनेत्री थिइन् । जहिले पनि फुसद छ भनेर सोध्दा उनको उत्तर हुन्थ्यो- सुटिङ्गमा व्यस्त छु । आजभोलि पनि उनलाई फुसदिलो भेट्न गार्‍हो पर्छ । तर फरक यति मात्र छ पहिले उनी सुटिङ्ग स्पटमा व्यस्त हुन्थिन् भने अचेल विपनाज् फेशन क्लबमा । तपाईंलाई पनि फुसद छ र विपनालाई भेट्ने इच्छा छ भने भाटभटेनीस्थित विपनाज् फेशन क्लबमा छिर्नुस् त्यहाँ उनलाई सियोमा धागो छिराउने प्रयास गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ ।